Almogrote gomero na parian Canarian vita amin'ny fromazy, paprika ary menaka. | ThermoRecipes
Appetizers5 minitraOlona 12175 kaloria
Androany aho dia mitondra recette avy any amin'ny nosy Canary, manokana avy amin'ny faritra La Gomera. Momba ny a pate vita amin'ny fromazy, dipoavatra y menaka. Tsotra be ny manao azy ary raha atao snack dia tsy tonga lafatra. Azontsika atao ny manaparitaka azy amin'ny mofo na manoboka azy amin'ny mofo sy moka.
Raha manana fromazy kanadiana efa antitra na tena sitrana ianao, tonga lafatra, raha tsy izany, ity fomba fahandro ity dia mety indrindra hanararaotana ireo fromazy sisa tavela tavela any ivelany any. Zava-dehibe ny ankabeazan'ireo fromazy dia efa antitra na efa sitrana, hanomezana azy tsiro mahery sy mitovy amin'ny fomba fahandro voalohany.
Un canary paté vita amin'ny fromazy, dipoavatra y menaka. Tsotra be ny manao azy ary raha atao snack dia tsy tonga lafatra.
200 g ny fromazy antitra na sitrana (osy kokoa), voatetika
Dipoavatra chorizo ​​maina 1 averina alaina anaty rano mafana adiny 1 (tsy voatery)
Menaka oliva malefaka 150 g (ka tsy dia matsiro loatra)
Cayenne 1 (tsy voatery)
Paprika mamy eran'ny sotrokely 1 manangona
1/4 - 1/2 jirofo tongolo lay kely
Napetrakay tao anaty vera sy notorotoroinay ireo akora rehetra 1:30 minitra, hafainganana mandroso 5-7-10. Hendry !!
Manolotra azy amin'ny lovia kely na sotro manokana izahay miaraka amin'ny mofo izay tianao indrindra sy ankafizinao.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Appetizers, Sakafo rezionaly, Tsotra, Latsaky ny 15 minitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Ho an'ny fotoana » Latsaky ny 15 minitra » Almogrote gomero na Canarian pâté
tsy manana voatabia voatoto ity almogrote ity. Canaria aho
Ny quiche an'ny Lacón miaraka amin'ny fromazy galisiana
Mofomamy spaonjy miaraka amin'ny lafarinina varimbazaha sy katsaka